janvier 2019 · déliremadagascar
Efa namoaka olona ambony nitàna andraikitra lehibe teto amin’ny firenena toy ny ministra, praiministra sy ny maro tsy voatanisa ny fianarana ambaratonga ampitan-davitra CNTEMAD. Continuer la lecture →
Naroso ny daty hanatanterahana ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an’ny mpiasam-panjakana ho an’ity taona 2019 ity. Continuer la lecture →
Nahavita ezaka ny firenena Malagasy momba ny ady amin’ny kolikoly tamin’iny taona 2018 iny raha ny indice de perception de la corruption (IPC) navoakan’ny transparency International no jerena. Continuer la lecture →
Socio-eco	 28 janvier 2019 R Nirina
RDJ MOZIKA : Ireo mpanakanto mendrika indrindra
Hetsika natokana ho an’ny mpanakanto Malagasy ny Rdj mozika. Ho fantatra amin’ny Sabotsy 02 febroary 2019 izao ireo mpanakanto mendrika izay mifanina ka ho safidian’ny mpihainon’ny RDJ. Continuer la lecture →
30 taona lasa, efa tany amin’ny taona 1989 nijoroan’ny antoko AKFM-FANAVAOZANA no nivoy ny « fisandratana » ny antoko araka ny teny filamatra hoe : « Ny fanandratana an’i Madagasikara ». Continuer la lecture →
Ny ampitson’ny fanendrena ireo mpikambana ao amin’ny governemanta vaovao tarihin’i Christian Ntsay ihany dia niroso tamin’ny famindram-pahefana ireo ministra maromaro. Continuer la lecture →
Nambaran’ny senatera Lylison René de Rolland fa tsy voatery ho ministra vao afaka mampandroso fa na dia mpamafa làlana aza dia efa mampandroso firenena izany. Continuer la lecture →
Hankalazaina isaky ny 26 janoary ny andro manerantany ho an’ny fadintseranana ka ny “organisation mondiale des douanes” no mikarakara izany. Continuer la lecture →
« Dingana lehibe mankany amin’ny fitsinjaram-pahefana ny fanovàna ny lehiben’ny faritra ho governora », hoy ny lehiben’ny faritra Analamanga, Ndranto Rakotonanahary. Continuer la lecture →